Jeneraly Rakotoarimasy André Lucien, minisitry ny Foloalindahy...
« Hatolotra ny rafitra manokana misahana ny fanadihadiana ary mandroso hevitra amin’ny ho fanasaziana na tsia ny miaramila iray ireo miaramila sy zandary mikomy teny amin’ny Fign, ny 20 mey 2010 sy ny teny amin’ny Bani Ivato ny 17 novambra 2010 », araka ny filazan’ ny jeneraly Rakotoarimasy André Lucien, minisitry ny Foloalindahy.
Efa eo am-pamaranana ny fombafomba tsy maintsy harahina amin’ny fanolorana miaramila eo anivon’ity faritra ity ny tompon’andraikitra ankehitriny. « Mety hiafara hatramin’ny fandroahana izany », hoy ihany ny minisitra.
Mikasika ny raharaham-pitsarana dia nilaza ity tompon’andraikitra ity fa « tsy misy itsabahan’izy ireo ny fitarana ho an’ny rehetra noho ny maha samy hafa izany amin’ny fitsarana miaramila ».
Ho an’ny raharaha Fign fia manamboninahitra simy no efa niakatra fitsarana ho an’ny rehetra ka ny efatra efa nahazo fahafahana vonjimaika, araka ny fantatra. Ireo teny amin’ny Bani Ivato izao no miandry ny fitsarana azy ireo.
Mikasika ny raharaha 7 febroary teny Antaninarenina indray dia nilaza ny minisitra fa « ny enina tamin’ireo manamboninahitra dia efa voatsara avokoa ».